wuxuu ahaa sidii Nin Aakhiro kasoo waramay! Qisooyinkii Jeel Ogaadeen.
Thursday, 20 September 2018 11:29
Waa mid kamida Qisooyinka xanuunka iyo murugada badan ee laga Reebay Jeelka caanka ah ee Jeel Ogaadeen waxaana Qisada sheekadan laga Qoray mid kamida dhalinyaradii dareenka Wadaninimo iyo kan dadnimo kujiray ee kamid ahaa ilaaladii soo martay Jeelkaasi.
Sheekadan waxaa Qoray Mahadi Haka Gaadhee Isma’il Darood oo isaga iyo Xaashi Saxane Gaagaale oo ah Askariga sheekada salka u ah uu dhex-maray xidhiidh saaxiibtinimo oo kadhashay dhibane Abdi dheere oo kamid ahaa saxiibka Isma’il Darood oo kujiray Jeelkaasi, waxaana idiin kala dhex baxayaa Qaybta 1-aad ee sheekada iyo saaxiibkeen Isma’il Darood.
Qaybta 1aad waxaan ku eegi doonaa taariikh nololeed kiisa oo kooban.
Xaashi wuxuu ku dhashay Dagmada Xamaro oo katirsan Gobolka Nogob taariikh du mar kay ahayd January 1, 1997. Xaashi waxa uu ladhashy 8 caaruur ah, 2 gabdhood iyo 6 will, waxa uuna ahaa ilamaha 2 aad, iyadoo hal will uu kawayn yahay.
Markuu kuray kuusan noqday, Xaashi waxaa loogeeyay abtigii oo daganaa agagaarka buurta caanka ah ee Qari-jiqood; halkaas ayuu kubarbaaray isaga oo iisheegay inuu xoolaha raacijiray.
Xaashi markuu 13 jirsday waxaa dib loogu soo celiyay magaalada xamaro oo ay kunoolaayeen qoyskiisa, wuxuuna iisheegay markuu kusoo laabtay magaalada inuu la kulmay duruuf nololeed oo aad uqalafsan. Aabaha dhalay Gaagale, waa Saxane Wali e, shaqadiisu waxay ahayd askari-nimo wuxuuna katirsanaa ciidanka maleeshiyada Dagmada Xamaro.
Xaqul-shaharka uu qaadan jiray xiligaas waxay ahayd 800 birr; tirada qoyskiisuna waxay kakoobnayd 10 ruux (8 caruur ah, isaga iyo afadiisa), waxaadna garan kartaa in mushaharkaasi uuna kufilnayn inuu daboolo baahida qoyskaas.
Hooyada dhashay Gaagale magaceeda waxaa layidhaa Cibaado Cabdulaah Daahir. Cibaado iyaduna dhinaceeda ayay kadadaali jirtay oo waxay samayn jirtay saanbuuse iyo canjeero Soomali, halka Gaagalana uu suuqa u iibgayn jiray. Shilimada kasoo baxana waxaa lagu kabi-jiray masruufka qoyska.
Mudo kadib, waxa soo baxay yabooh sheegaya in loo baahan yahay dhalinyaro laqoro askar-nimo oo lagu biiriyo ciidanka gaarka ah ee Liyuu Police. Gaagale markaa da’diisu waa 15jir, wuxuuna kubiiray dhalinyaradii laqoray askarinimo waxaana lagu soo xareeyay xerada tababarka ee Garab Case oo kutaal magaalada Jigjiga.
Gaagale wuxuu dhamaystay tabarkii ciidanimo wuxuuna kamid ahaa dufacadii 5aad ee ka qalin jabisay xerada garab case.
Sida uu ii xaqiijiyay, wuxuu katirsanaa ciidan ka liyuu poliska mudo 4 sano iyo badh ah. 18kii bilood ee ugu danbaysay askarinimadiisa wuxuu ka shaqaynayay Jeelka dhaxe ee looyaqaano Jeel-Ogaadeen, isaga oo ahaa ilaalada gaarka ah ee jeelka.
Gaagale wax balwad ah malahayn; mushaharka uu qaatana 2ba meelood wuxuu udirijiray hooyadii iyo qoyskiisa halka inta soo hadhana uu isagu kunoolaan jiray.
(Qaybta 2aad ee sheekadan waxaan ku eegi doonaa xidhiidh kii na dhexmaray aniga iyo Gaagale; iyo warqadii ugu horaysay ee uu xabsiga iiga keeno).
Bye: Isma’il Darood
More in this category: « Hab-dhaqanka Madaxda Maamul Goboleedyada Iyo Isbedelka Gobolka (Warbixin) Dalkee Ayuu Farmaajo Daacad U Yahay, Mareykanka Mise Soomaaliya?! »